Videos Archives | Page 26 of 28 | Popular
နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုမရှိပေမယ့် ရှေ့ကမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေရှိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
အခုချိန်မှာ သူ့ဆီမှာနွေးထွေးတဲ့ မိသားစုမရှိပေမယ့် ရှေ့ကမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေရှိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း . . .
Forever Gems by ရွှေနန်းတော် (2016 ASEAN BUSINESS INNOVATION AWARD) ၏ Flagship Jewellery ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို မတ်လ ၂၅၇က်နေ့ မနက် ၉နာရီက Junction City ပထမထပ်မှာ…
အလှမယ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ မျိုးကိုကိုစန်း ဟာ Cele Cele Small Page ကိစ္စရပ်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သံသယ ရှိသူ အဖြစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၇ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ…
အကယ်ဒမီ ဝတ်မှုံရွှေရည်က Cele Cele Small Page ကို တရား စွဲဆိုထားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ်မှ ဇန်နဝါရီလ ၂ဝ ရက်နေ့ မှာ အခုလို သွားရောက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှု များကို…
အကယ်ဒမီနေတိုးက ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင် ရိုက်ကူးပုံဖော်တဲ့ "ထာဝရအမေ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် post recording ကို မြေနီကုန်းပလာဇာမှာရှိတဲ့ zin yaw entertainment မှာ သွားရောက် အသံသွင်းနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယခုလိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် နိုင်းနိုင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံက အလည်ပြန်လာတဲ့ ဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေကို ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ၂၈ရက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီခွဲက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ နိုင်းနိုင်းတို့မိသားစု ပြန်လည်ဆုံစည်းတဲ့....
အလှမယ် အိန်ဂျယ်လမုန်ရဲ့ Favorite Holiday အကြောင်းမပြောခင် သူမက နိုင်ငံတကာ Miss ပြိုင်ပွဲပြိုင်လာသူ တစ်ယောက်ဆိုတော့ ဒေသန္တရဗဟုသုတတွေများစွာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပေါ်ပြူလာကရိုက်ကူးတင်ဆက်လိုက်တဲ့ အလှမယ် အိန်ဂျယ်လမုန်နဲ့ သူမပြောတဲ့ Favorite Holiday အကြောင်းကို…
အလှဆင်စိတ်ထား တူယှဉ်ခရီးသွား – အမရာငြိမ်း
အမရာငြိမ်းက ခရီးဆောင်အိတ်နဲ့ ခရီးသွားလမ်းမထက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်ကို ခရီးထွက်လဲ မသိပါဘူး။ ဒီရာသီကလည်း ခရီးသွားရာသီပေကိုး။ အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပန်းဖြေခရီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပဲခရီးသွားသွား ခရီးသွားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ တကယ့်ကို အများကြီးပါ။ ဒါကြောင့် ပေါ်ပြူ…
အလှဆင်စိတ်ထား တူယှဉ်ခရီးသွား – ဥက္ကာမင်းမောင်
ဥက္ကာမင်းမောင်က ခရီးဆောင်အိတ်နဲ့ ခရီးသွားလမ်းမထက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်ကို ခရီးထွက်လဲ မသိပါဘူး။ ဒီရာသီကလည်း ခရီးသွားရာသီပေကိုး။ အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပန်းဖြေခရီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပဲခရီးသွားသွား ခရီးသွားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ တကယ့်ကို အများကြီးပါ။ ဒါကြောင့် ပေါ်ပြူ…
ဒီဇင်ဘာ အားလပ်ရက်မှာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဘာလုပ်နေမလဲ
လူအများပျော်ရွှင်စွာ အနားယူအပန်းဖြေကြမယ့်ဒီကာလမှာ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း တစ်ယောက်ကတော့ အလုပ်များတဲ့ အနုပညာရှင်ပီပီ ရှိုးတွေပဲဆိုနေမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်တွေကိုမေ့ထားပြီး အနားယူပစ်လိုက်မှာလားဆိုတာ . . .